हलकारो विशेष – Page 12 – Halkaro
लिपुलेक सम्झौताः मित्र राष्ट्र विरुद्ध मोर्चा बनाएर आन्दोलन गर्न नपरोस
प्रकाशित मिति : २०७२, २० श्रावण बुधबार October 4, 2016
(पछिल्लो समयमा नेपालको भूमि लिपुलेकलाई आधार मानेर भारत र चीन सरकारले व्यापारिक सम्झौता गरेका छन् । नेपाली भूमि माथि सम्झौता गर्दा नेपाल पक्षसँग कुनै पनि सहकार्य र सल्लाह नै नगरि गरिएको यो सम्झौता नेपालको हितमा नभएको सबैलाई भान भएको छ । यसै विषयलाई लिएर हलकारोले सरोकारवाला निकाय, विभिन्न राजनीतिक दल, सिमाविद्हरुसँग चरवद्ध रुपमा कुराकानी गरि […]
सडक व्यवस्थापनमा युवा जोश
प्रकाशित मिति : २०७२, १८ श्रावण सोमबार October 4, 2016
काठमाडौँ । युवा जोश, केही गरौँ भन्ने अभिलाषा त थियो तर के गर्ने, कुनै काम थिएन । जीवनमा अनेक ठक्कर खाएको एक युवा काठमाडौँको चावहिलमा एक दिन कैयौँ घण्टा सडक किनारको रेलिङ्मा बसेर सडकमा नियाली रह्यो । सडकमा अनेक साना ठूला सवारी गुडे तर पनि सडकबीच खडा ट्राफिक भने दिनभर बीचमै खटिइरह्यो । […]
भुकम्प पछिको सामाजिक कम्पनः साँखुले पाएन अझै राहत
प्रकाशित मिति : २०७२, १४ श्रावण बिहीबार October 4, 2016
काठमाडौँ । गत वैशाक १२ गते गएको शक्तिशाली भुकम्पका कारण हजारौँको ज्यान गयो, लाखौँले आफन्त गुमाए, घरबार बिहिन भए । अहिले भुकम्प गएको चार महिना वितिसक्दासमेत अझै कयौँ स्थानमा सरकारको उपस्थिती पुगेको छैन् । सरकार पुगेको स्थानमा पनि आफ्नाहरुलाई हेरिएको छ । आफ्ना कार्यकर्ता, आफन्तहरुले मात्र राहत पाएका छन् । ‘हलकारो’ ‘महाभुकम्प पछिको सामाजिक पराकम्प’को […]
भत्केको त्रिवि बिग्रेको शैक्षिक वातावरण
प्रकाशित मिति : २०७२, १३ श्रावण बुधबार October 4, 2016
काठमाडौँ । स्नातक तहको परीक्षा दिएर झण्डै एक वर्ष स्नातोकोत्तर तहको पढाइ सुरु गर्न नपाएका विद्यार्थीहरु त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गत कक्षा सञ्चालन गर्ने भए पनि उत्साही भएका थिए । तर अहिले त्यो उत्साह विद्यार्थीहरु माझबाट हराउँदै गएको छ । त्रिविले वार्षिक परीक्षा प्रणालीबाट नतिजा राम्रो नआएको भन्दै स्नातोकोत्तर तहको पठन पाठन सेमेस्टर प्रणालीमा लगे […]
बन्दीगृहकी आमाः इन्दिरा रानामगर
प्रकाशित मिति : २०७२, १२ श्रावण मंगलवार October 4, 2016
काठमाडौँ । एउटा निर्दोष बच्चा विनाकसुर सजाय भोगिरहेको उ विनाकारण जेलको चिसो खाइरहेको होस । यस्तो देख्दा कसको मन नरोला रु कसको मनलाई चोट नपुराउला रु हो २५ वर्ष अगाडि यस्तै घटनाले मन छोएको थियो इन्दिरा राना मगरको । वाल्यअवस्था निकै कठिनरुपमा गुजारेकी इन्दिरालाई भित्रै देखि बालबालिकाको पक्षमा केही गरौँ भन्ने थियो । विना सम्झौता […]
मानिस नै भगवानको रुपमा उपस्थित भइदिँदा
प्रकाशित मिति : २०७२, ९ श्रावण शनिबार October 4, 2016
काठमाडौँ । भगवान भन्दा माथि कोही हुँदैन् । तर कसैका लागि मानिस नै भगवानको रुपमा उपस्थित भइदिँदा त्यो क्षण खुसीले पोल्टा भरिन्छ । अफगानस्थानको काबुलमा रहेको अस्पतालले जीवनको सिमा ७२ घण्टा तोकेर नेपाल पठाएका लम्जुङ शुन्दरबजारका खड्ग सिंह गुरुङ (४०) यतिखेर नयाँ जीवन बाँचिरहेका छन् । काठमाडौँको ग्राण्डी अस्पालमा डा. राकेश कुमार साह नेतृत्वको टोली […]
‘भगवान छोरो फर्काइदेउ की हामीलाई पनि लगिदेउ’
प्रकाशित मिति : २०७२, ७ श्रावण बिहीबार January 19, 2017
भक्तपुर । ‘A hundred hearts would be too few To carry all my love for you Happy valentine day 2069′ २०६९ सालको प्रेम दिवसमा छोरालाई उनकी प्रेमिकाले दिएको चिनो अझै सम्हालेर राखेकी छिन् सविनकी आमाले । चियाको कपमा फोटोसँगै लेखेको यो चिनोले अझै आमाको अधुरो सपनालाई ब्यूझ्याँउछ एउटा मात्र छोरा थियो, बुहारी भित्र्याउने धोको अब […]
रुपन्देहीका दुई युवाको उदाहरणीय काम
प्रकाशित मिति : २०७२, ३ श्रावण आईतवार October 4, 2016
रुपन्देही । विदेश जानका लागि गाँउमा ऋण खोजेर ठिक्क थियो । मेनपावरमा पासपोर्ट बुझाइसकेका थिए । विदेश जाने भित्रैदेखि इच्छा भने थिएन । पासपोर्टमा मलेसियाको तीन वर्षे भिसा पनि लागिसकेको थियो । जिल्लाको रुद्रपर–४ का विश्वनाथ ढकाल (२६), १२ कक्षा उत्तीर्ण भई बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटबाट तीन वर्षे आर्क वेल्डिङ् कोर्स सकेर बसेका थिए । भित्रैदेखि […]
मायाको शहरमा हराएका हरि
प्रकाशित मिति : २०७२, १९ असार शनिबार October 5, 2016
माया पनि खरिद बिक्री हुँदो रहेछ तिम्रो शहरमा सुनलाई पनि खियाले छुँदो रहेछ तिम्रो शहरमा तिम्रो शहरमा फलाम पनि हीराको ठाँउ खोज्न थालेछ कि ढुङ्गा पनि देवताको ठाँउ खोज्न थालेछ कि ……. हरिहर तिमिल्सिनाका माया पिरतीका यि शक्तिशाली गितीका शब्द निकै चर्चित मानिन्छन् । यीनको गीत जत्तिकै रसिला कविता पनि छन् । मौसम बैमान […]
लिपुलेक सम्झौताः नेपालको सार्वभौमिकता विरुद्धको कदम
प्रकाशित मिति : २०७२, १९ असार शनिबार October 4, 2016